कसरी टिक टोकमा इन्स्टाग्राम थप्न RoidHub
Ik कसरी टिक टोकमा इंस्टाग्राम जोड्ने
टिक टोकमा कसरी इन्स्टाग्राम जोड्ने
4.5 /5( 96 वोट )
इन्स्टाग्राम युवा पीढीको लागि पहिलो गुफा थियो जबसम्म टिकटोक क्रेजले त्यो शीर्षक हटाएन। के तपाईंलाई थाहा छ कि इन्स्टाग्राम प्रोफाइल तपाईंको TikTok खातामा थप्न सकिन्छ? त्यसोभए हामी तपाइँलाई कसरी टिक टोकमा इन्स्टाग्राम जोड्ने कुरा बताउनेछौं।
समयको किशोर किशोरीहरूको लागि दुई सब भन्दा ध्यान खिच्ने प्लेटफर्महरू केहि प्लेटफर्महरू छन् जुन प्रत्येक प्लेटफर्मको लागि विशेष हुन्छन्। प्रत्येकको आफ्नै विशेषता र सामर्थ्य हुन्छ। यदि तपाइँ अरूको लागि एउटा त्याग गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यहाँ एक धेरै धेरै संभावना छ कि तपाईं अर्को प्रयोग नगरी धेरै याद गर्नुहुनेछ।
टिक टोकमा कसरी इन्स्टाग्राम जोड्ने?
कसरी माध्यमिक वा व्यापार इंस्टाग्राम खाता TikTok मा लिंक गर्ने
कसरी टिकटोकबाट इन्स्टाग्राम अनलिink्क गर्ने
TikTok छोटो र आकर्षक मोबाइल भिडियोहरूको लागि गो-टु विकल्प हो। यी रमाईलो र सहज छोटो क्लिपहरू अनुप्रयोगमा सिर्जना गर्न र अपलोड गर्न सजिलो छ।
एप्लिकेसनले सामग्रीको सबै प्रकारहरू बोक्छ र तपाइँलाई कुनै पनि समयमा रमाईलो र हास्यास्पद छोटो क्लिपहरूको कहिल्यै अन्त्य नहुने स्ट्रिमको साथ रमाईलो गर्न दिन्छ। सबै तपाईंको स्वाद र मनपर्ने अनुसार।
जबकि इन्स्टाग्राम टिक टोक भन्दा पहिले आयो। यसले सामग्री सिर्जना र साझेदारीको फरक दर्शन पछ्याउँछ। यसको अद्भुत तस्वीर र भिडियो फिल्टरको साथ। यो अझै पनि सामग्री विकास र साझेदारीको लागि प्रीमियम प्लेटफर्म हो।
तैपनि टिकटोक एक्लो समयको लागि तपाइँलाई व्यस्त राख्न पर्याप्त छ। अझै, व्यक्ति आफ्नो ईन्स्ट्राग्राममा केहि समय दिन चाहन्छन्। त्यसोभए यदि तपाईं पनि सोध्दै हुनुहुन्छ “म कसरी मेरो इन्स्टाग्राम मेरो टिकटोकमा थप्न सक्छु?
हामी तपाईंलाई प्रक्रियामा लैजान्छौं। यो तपाईंको एन्ड्रोइड मोबाइल फोन वा उपकरण वा तपाईंले बोक्नुहुने एप्पल आईफोन हुनुहोस्। इन्स्टा कसरी टिक टोकमा थप्ने भन्ने जवाफ सरल छ।
तपाईं दुबै अनुप्रयोगहरू जडान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ बाहिर केहि व्यक्तिहरु पहिले नै TikTok अनुप्रयोग प्रयोग गरीरहेका छन् इन्स्टाग्राम कथाहरू र स्थिति क्लिपहरू सिर्जना गर्न। जहाँसम्म, धेरैलाई यो तथ्य थाहा छैन कि यी दुबै अनुप्रयोगहरू टिक टोक प्लेटफर्मबाट जडान हुन सक्छ।
तपाईंले यी दुई अनुप्रयोगहरूमा खाताहरू लिंक गर्न सुरु गर्नु अघि। तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि ती दुई फरक प्रकारका अनुप्रयोगहरू हुन् र धेरै भिन्न कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्दछ। इन्स्टा फेसबुकको स्वामित्वमा छ र टिक टोक चिनियाँ कम्पनी हो।
इन्स्टाग्राम र टिकटोक लि link्क गर्नका लागि तपाईले आफ्नो फोनमा दुबै अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्नुपर्नेछ। किनकि तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईंसँग पहिले नै दुबै खाताहरू हुन सक्छन्। अब तपाईं प्रक्रिया मार्फत जान तयार हुनुहुन्छ। त्यसोभए कसरी इन्स्टाग्रामलाई टिकटोकमा लि link्क गर्ने।
यी चरणहरू हुन्। दिइएको क्रममा तिनीहरूलाई प्रदर्शन गर्नुहोस् र तपाईं कुनै समय बिना हुनुहुनेछ।
1 Tik Tok अनुप्रयोग खोल्नुहोस् र प्रोफाइल आइकनमा ट्याप गर्नुहोस्। यो तल दायाँ कुनामा एक पटक तपाइँको उपकरणको स्क्रिनमा अनुप्रयोग खोलिएको छ।
2 एक पटक तपाईं पहिलो चरणमा हुनुहुन्छ भने अब सम्पादन प्रोफाइल विकल्पमा ट्याप गर्नुहोस्।
3 यहाँ तपाईं आफ्नो इन्स्टाग्राम र यूट्यूब प्रोफाइलहरू थप्न विकल्प देख्न सक्नुहुनेछ। इन्स्टाग्राम ट्याबमा ट्याप गर्नुहोस्।
अब तपाइँ तपाइँको इंस्टाग्राम लगइनमा लगिने छ। कागजातहरू भर्नुहोस् जुन तपाईंको फोन नम्बर, प्रयोगकर्ता नाम, वा ईमेल, र पासवर्ड समावेश गर्दछ। त्यसो भए लगइन ट्याब थिच्नुहोस्। तपाईं TikTok को माध्यम बाट तपाईंको प्रोफाइल मा लगिने छ।
अब तपाइँको खातालाई ईन्स्टा खाता पहुँच गर्न अनुमति दिन "प्राधिकृत" विकल्पमा ट्याप गर्नुहोस्।
यो कसरी तपाईंको मोबाइल फोनमा टिक टोकमा ईन्स्टा थप्ने हो। अब तपाइँ तपाइँको भिडियो सिर्जनाहरू तपाइँको फोनमा सिधा टिकटोक अनुप्रयोगबाट इन्स्टामा साझा गर्न सक्नुहुन्छ। दुई अनुप्रयोगहरूको बिच स्विच गर्ने लामो साघुँरो मार्गबाट ​​जानु पर्दैन।
तपाईं यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। व्यक्ति जो आफ्नो व्यवसाय इन्स्टाग्राम खाताहरू वा दोस्रो इन्स्टाग्राम खाताहरू जडान गर्न कोशिस गर्दैछन् तिनीहरूलाई केही समस्याहरू हुन सक्छन्। जस मध्ये सब भन्दा गलत गलत पासवर्ड मुद्दा हो। यो ठीक गर्न सजिलो छ। यो गर्नको लागि, विधिसँग निम्न सरल चरणहरू छन्।
तपाईंको इन्स्टाग्राममा तपाईंको दोस्रो वा व्यापार खातामा जानुहोस्।
सेटिंग्स मा ट्याप गर्नुहोस्
सुरक्षामा ट्याप गर्नुहोस्
विकल्प 'यस खाताको लागि पासवर्ड सिर्जना गर्नुहोस्' ट्याप गर्नुहोस्
त्यो खातामा पासवर्ड दिनुहोस्।
अब यी प्रमाणपत्रहरू प्रयोग गर्नुहोस् टिकटोकबाट इन्स्टाग्राममा जडान गर्न। त्यसोभए कसरी इन्स्टाग्रामलाई TikTok मा व्यापार वा दोस्रो इन्स्टाग्राम खाताबाट लिंक गर्ने।
कुनै पनि कारणका लागि तपाईं दुई खाताहरू अलग गर्न चाहनुहुन्छ तपाईं के गर्नुपर्छ? यस अवस्थामा, तपाईले पहिलो केसमा उल्लेख गरिएको प्रक्रिया दोहोर्याउनु पर्छ।
यहाँ "इन्स्टाग्राम थप्नुहोस्" विकल्प थिच्नुको सट्टा। तपाईंले "अनलिink्क" बटन ट्याप गर्नुपर्नेछ। त्यसो भए TikTok अनुप्रयोग स्वचालित रूपमा तपाइँको इन्स्टाग्राम विवरणहरू मेटाउनेछ।
त्यसोभए यी चरणहरूको उपयोगको माध्यमबाट कसरी इन्स्टाग्रामलाई टिक टोकमा थप्न एउटा साधारण कार्य भयो। अब यो प्रदर्शन गर्नुहोस् र तपाईंको जीवन सजिलो बनाउनुहोस्।
म कसरी मेरो इन्स्टाग्रामलाई मेरो टिकटोकमा थप्दछु
कसरी टिक टोकमा इन्स्टा थप्ने
कसरी TikTok मा Instagram व्यापार खाता थप्ने
कसरी टिकटोकमा इन्स्टाग्राम जोड्ने